Qalaafuu ka yimid, Gaalkacayaa lagu qalanayaa – Rasaasa News
Qalaafuu ka yimid, Gaalkacayaa lagu qalanayaa
May 26, 2009 Ogaden News
Galkacyo – Somaliya [May 25, 2009] – Haashim Mursal Daahir waa 20 jir, 20 cisho ka hor ayay ciidamada Ashahaado la dirirka Puntland (PIS) ku xireen Kaalkacayo, sababtu waa deegaanka uu kasoo jeedo oo ah Qalaafe iyo dabcan Heybtiisa, qaraabadiisa waxa ay ka baqdin qabaan in maalmaha soo socda lagu wareejin doono xabashida.
Waa mid uun ka mid ah dhalinyarada gumeysiga kasoo carartey ee soo miciin biddey maamulka Puntland, gashayna gacanta arxanka daran ee PIS-ta, dambigiisa ugu weyn waa heebta uu kasoo jeedo , KismaayoNews waxay idiin soo gudbineysaa xogta wiilkani oo dhamaystiran.
Waxaa nala soo xariirey dad qaraabo la ah Haashim Mursal oo fariimo ilmo huwan u gudbinaya aduunka, waxay ka cabanayaan cadaalad darro xad dhaaf ah oo galaafanaysa nafta dad nool, waxay noo sheegeen in Haashim laga qabtay bartamaha magaalada Gaalkacayo muddo 20 cisho ka hor, wixii maalintaasi ka dambeeyey cidna il meeysan saarin oo wuxuu ku xiranyahay saldhige dhexe (koowaad) ee Magaalada dhanka Puntland.
Ma jirto wax dacwad ah oo cad oo lagu heysto,iyo maxkamada lasoo taagay toona, kaaga daran dadkii lala qabtay waa lasii daayay kadib markii ay hub aruursadeen heebahooda oo magaalada degen, qaraabada Haashim waxay ka cabsi qabaan in maalmaha soo socda loo dhiibo xukuumada xabashida.
Haashim waxa uu 20 sanno ka hor ku dhashay magaalada Qalaafe ee dhulka Ogaadeeniya, isaga oo ilmo yar ah ayuu usoo qaxay magaalada Gaalcayo markaasi oo uu baxsad ka ahaa nidaamka ummula dooxa ee xabashida.
Muddo 7 sanno ah waxa uu ka shaqaynayay shirkad hillibka goowracda, kadibna dhoofisa oo lagu magacaabo JAQIIQ hase yeeshee 3dii sanno ee ugu dambeeysey waxa uu la shaqaynayay shirkad biyaha dhaamisa oo booyado ku daabusha biyaha, geeysanaya deegaano biyo la’aan ah oo lagu magacaabo OPEC , xilli maalin ah isaga oo bartamaha magaalada alaabo uga gadaya booyada oo garaash ku jirtey, una socotey safar biyo iibin ah ayay ciidamada Ashahaado la dirirka ee Puntland ka qabteen bartanka magaalada.
Sida ay sheegeen ehelada Haashim, dadaal baddan ayaa loo galay siideyntiisa, laakiin illaahay waxbo kama aabeynin, xittaa waxaa dadaalkaasi galay mulkiilayaasha shirkada OPEC oo mirro la’aan ku hungoobey dadaalkooda bini’aadanimo.
Wiilka waxaa laga fujin la’yahay taliyaha saldhiga koowaad oo lagu magacaabo Sumaysane, Gudoomiyaha gobobla Mudug iyo Duqa Magaalada.
Sida ay ku doodayaan ehelada Haashim walwalkooda ugu weyn waa in maalmaha soo socda loo gubiyaa xukuumada xabashida, waxay kaloo ka cabanayaan in aanan la sheegin dambiga lagu heysto.
Haashim waxaa lala xirey illaa 3 qof, hase yeeshee midkoodna xabsiga kuma sii jirrin 48 saac oo is xigga, dhamaantood waxaa lagu siidaayay xoog kadib markii beelahooda ay u doodeen, hubna soo gurteen.
Qabashada Haashim waxay cabsi weyn iyo argagax ku abuurtey dhalinyarro baddan oo isku deegaan ay kasoo jeedaan oo magaalada ku nool, in baddan oo ka mid ah waxay u qaxeen Jubbooyinka si ay uga badbaadaan cadawga sokeeye ee kan shisheeye ka iibsanaya.
Haashim ma uusan guursan, wuxuu kusoo korrey rajjonimo, isaga ayaa koriinka noloshiisa qeyb weyn ka ciyaarey, isaga oo yar ayuu bilaabay xamaalasho, wuxuu bidhaaminayay mustaqbal ifaya oo ballanqaad miiran ah, ilqabad ahaan muuqaalkiisa ma ahan nin la quuri karro, laakiin PIS-ta Puntland ma ahan kuwo casharkaasi loo meeriyey, ka sokow caadifada qabiil ee xaqqa ka indho tirtey, Haashim wuxuu u yahay cambar xeebta laga heley.
Sanadihii lasoo dhaafay, malaayiin lacag ah ayay kaga dhufteen suuqa macaashka baddan ee kala iibsiga bini’aadamka, oo ka xanuun baddan Suuqii Adoomaha madoow ee Angola horaantii qarnigii tagay.
Qofka bartilmaameedka ah waa in dhowr calaamo laga helaa, kow waa inuu kasoo jeedo gobolka Ogadeeniya ee xabashidu gumeysato, markaasi waxa uu suuq ka leeyahay Addisababa oo inta lagu eedeeyo ONLF ayaa la siisanayaa malaayiin bir ah, haddii kale waa in uu lahaadaa shakli ama muuqaal wadaad, markaasi wuxuu suuq ka leeyahay maraakiibta dagaalka ee Maraykanku leeyahay ee xeebta taagan, waxaa lagu eedeynayaa argagixiso.
Kolba heebta uu yahay qofka waa arrin aad muhiim ugu ah Ashahaado la dirirka, haddii heebtiisu aysan ku hubeysneyn Puntland waa Biciidka loo baahanyahay in la ugaarsado, waana kaas dabinka uu Haashim ku dhacay.
Eheladaha wiilka ee nala hadashay oo ka baqdin qabba in la dhibaateeyo haddii magacooda la baahiyo, waxa ay jaaliyadaha dibbada iyo dhamaan dadka waxgarabka ah ee ka damqaya arrintani ka codsanayaan in ay arrintani soo farrogaliyaan, waxay sidoo kale baaq u dirayaan Issimada Puntland oo ay ka codsanayaan in ay doorkooda ka ciyaaraan.
Is Somalia in Ethiopian Army’s Crosshairs Again?
Gabalka Jarar oo Ciidamada ugu Badan ee Kilalka Laga Qorayo